အဆိုပါဝေါဟာရကို "ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်" ဒီ site ကိုတလျှောက်လုံး, တဦးတည်းပုံစံသို့မဟုတ်အခြားအတွက်အသုံးပြုသည် - သို့သော်အဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး တချို့ကကရိုးရိုးအခြားသူတွေနှင့်အခြားသူများ '' အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူအမှားရှာဖွေတာကပါဝင်ပတ်သက်ပေမယ်သောအမှုမဟုတ်ပါသောစှဲရပေမည်။ အထွေထွေစည်းမျဉ်းနှင့်အမျှဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်စိတ်ကူးများအကြားအချို့စိတ်ခံစားမှုနှင့်အသိပညာဆိုင်ရာအကွာအဝေးဖွံ့ဖြိုးဆဲကပါဝငျ - သင့်ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူများ '' ဟုတ်မဟုတ် - ပိုကောင်းသူတို့ရဲ့အမှန်တရား, တရားဝင်မှုနှင့်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်အကဲဖြတ်ဖို့။
ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်သွေဖည်ငြင်းပယ်ရန်အဘို့အကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအရာကိုအကြောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရသော, ဆင်ခြင်တုံတရားအကဲဖြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြိုးပမ်းသည်။ ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ tools တွေကိုအသုံးပြု ယုတ္တိဗေဒ ကဖြစ်ချင်ဇောကျော်ပွောသမြှယုံသို့မဟုတ်တစ်ယူသန်ဆန်ကျော်သံသယယုံကြည်ခြင်းကျော်အကြောင်းပြချက်, pseudoscience ၏သိပ္ပံနှင့်ကမ္ဘာ၏ကျိုးကြောင်းတန်ဖိုးထားသောကွောငျ့နှင့်သိပ္ပံ။ ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တရားမှာရောက်လာမည်ကိုအာမမခံပေမယ့်အဲဒါကိုပိုပြီးဖြစ်နိုင်ဖွယ်မအခြားနည်းလမ်းမဆိုထက်စေပါဘူး။
နိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်ဘာသာရေးနှင့်တူတစ်ခုခုအကြောင်းကိုပြင်းထန်စွာစဉ်းစားရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသူတစ်ဦးဖွင့်လှစ်ထားရှိသောဖြစ်ရမည်။ ထိုအခွင့်ကိုအခြားသူများကကားသင်တို့ကိုလည်းမှားမသာသောဖြစ်နိုင်ခြေမှပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်းလိုအပ်သည်။ သိပ်မကွာခဏကလူတစ်ဦးစိတ်ပြင်းထန်ခြင်းသို့ဖြန့်ချိ အငြင်းပွားမှုများ ပုံကိုသူတို့ကိစ္စအပေါ်မှားစေခြင်းငှါစဉ်းစားရန်မဆိုအချိန်ယူပြီးမရှိဘဲ။
မရတိုင်းစိတ်ကူးညီတူညီမျှတရားဝင်သည်သို့မဟုတ်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ခြင်း၏တန်းတူအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်, လညျး "Open-စိတ်" ဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်နည်းပညာပိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးကိုမှန်ကန်စေသည်ဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်ခွင့်ပြုသင့်သော်လည်း, ငါတို့နေဆဲသူတို့တောင်းဆိုမှုများအတှကျထောကျပံ့ပူဇော်ကြောင်းလိုအပ်ရမယ် - မနိုင်သို့မဟုတ်မကျင့်ကိုကျင့်လျှင်သူတို့စစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ကြလျှင်အဖြစ်ကျနော်တို့သူတို့အားတောင်းဆိုမှုများကိုထှကျသှားစပွေီးနှင့်သရုပ်ဆောင်အတွက်အပြစ်လွတ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်စိတ်ကူးတစ်ခုလက်ခံဘို့ရှင်းလင်းစွာယုတ္တိနှင့်ပင်ကိုယ်မူလအကြောင်းပြချက်ရှိသည်ရင်တောင်, ငါတို့သည်လည်းဖြစ်ကောင်းကလက်ခံဘို့အစိတ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်ရှိသည် - ကျွန်တော်၏အပြည့်အဝသတိထားပါမပြုစေခြင်းငှါအရာအကြောင်းပြချက်တွေ။ ဒါဟာကျနော်တို့အဆုံးစွန်ကိုအလွယ်တကူယခင်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သောကြောင့်နှစ်ခုခွဲခြားရန်သင်ယူကြောင်း, သို့သော်ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
တစ်ခုခုယုံကြည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းပြချက်အတော်လေးနားလည်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ချက်နောက်ကွယ်မှယုတ္တိဗေဒမှားယွင်းနေသည်မှန်လျှင်, နောက်ဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်ဆင်ခြင်တုံတရားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တစ်ဦးသံသယ, တရားမျှတထုံးစံ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်ချဉ်းကပ်သွားနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ကျနော်တို့ဘေးဖယ်ထားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှု set နဲ့သူတို့ရဲ့အသုံးအနှုန်းများအပေါ်ယုတ္တိဗေဒနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်းအကဲဖြတ်ဖို့ဆန္ဒရှိသူဖြစ်ရမည် - ဖြစ်နိုင်သည်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်ငြင်းပယ်သူတို့ယုတ္တိစံ (အထိအသက်ရှင်ရန်ပျက်ကွက်လျှင် ပွင့်လင်းစိတ်) ကိုကြည့်ပါ။
ကျနော်တို့မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွက်စိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိသည်ကြောင့်လူတွေရှေ့ဆက်ခြေလှမ်းများနှင့်မသက်ဆိုင်သူတို့အဘို့ယုတ္တိဗေဒသို့မဟုတ်သက်သေအထောက်အထားအားနည်းခြင်းရှိမရှိသူတို့ယုံကြည်ချက်တွေကိုခုခံကာကွယ်ရန်ကြိုးစားရန်အဘို့အကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်စင်စစ်တစ်ခါတစ်ရံလူတွေကိုသူတို့ကအကြောင်းအများကြီးမသိရပါဘူးသော်လည်းစိတ်ကူးတစ်ခုခုခံကာကွယ်ပါလိမ့်မယ် - သူတို့ကလုပ်ပေးထင်, ဒါပေမဲ့သူတို့မကျင့်။
ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်လေ့ကျင့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်သူတစ်ဦးသို့သော်လည်းသူတို့ပြီးသားသူတို့သိရန်လိုအပ်သမျှကိုသိသောယူဆရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုသူတို့အရေးကြီးသော, သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေမသိဘဲလျှင်သဘောမတူသူတစ်ဦးတစ်ဦးအနေအထားငြင်းခုံမှသူတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာတစ်ခုခုနှင့်ရှောင်ကြဉ်သင်ပေးနိုင်သည်ကိုခွင့်ပြုရန်ဆန္ဒရှိသည်။
အဲဒီမှာဖြစ်ကောင်းစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ကူးများနှင့်ဆက်ဆက်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းအတွေးအခေါ်များဖြစ်ကြပေမယ့်အဆုံးစွန်သောအုပ်စုတွင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စိတ်ကူးရှိသည်ဖို့ကောင်းတဲ့နေစဉ်ကျနော်တို့အဆုံးစွန်သောအုပ်စုဝေးယခင်ထက်ဝေးသေးငယ်ကြောင်းနားလည်ရပေမည်။ များစွာသောဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏အာရုံဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်သူတို့အားကိစ္စရပ်များ - သို့သော်ဦးစားပေးမည်ကြောင့်မဟုတ်ရင်ကျနော်တို့ကိစ္စရပ်များ၏အတော်လေးတွေအများကြီးအကြောင်းကိုလုံးဝအချို့မဖွစျနိုငျခံရပေလိမ့်မည်။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသံသယများနှင့်ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်တင်ပြသောအခါ, သူတို့ပဲသူတို့တစ်တွေနိဂုံးချုပ်သူတို့ပြသကြပါပြီသို့မဟုတ်ပါကမုချမှန်ကြောင်းဖျောပွနိုငျမဆိုလိုပါကြောင်း, ဖြစ်ကောင်းမှန်ကိုပြသနိုင်သောကြောင့်ဆိုတာသတိရပါ။
အချို့သောအမှန်တရားတွေအခိုငျအမာစိတျခမြှုလိုအပ်ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေအမှန်တရားတွေသာစမ်းသဘောခံယူချက်လိုအပ် - ပြောကြောင်း, ကျနော်တို့သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အကြောင်းပြချက်ခွင့်ပြုကဲ့သို့တူညီသောခွန်အားနှင့်သူတို့ကိုယုံကြည်သင့်ပါတယ်။
ဘာသာစကားတစ်ခုရှုပ်ထွေးပြီးသိမ်မွေ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာနားလည်မှုလွဲမှားခြင်း, သဲသဲကွဲကွဲမရှိသော, ပြီးဝိုးတဝါးအမျိုးမျိုးတို့ကိုမှအသစ်စက်စက်စိတ်ကူးများအပါအဝင်စိတ်ကူးများအမြိုးမြိုး, ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့ပရိယာယ်များနှင့်ရှုပ်ထွေးခဲဆကျသှယျဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို၏တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအခြားသူတွေကိုလက်ခံရရှိနေကြတယ်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျနော်တို့လက်ခံရရှိထားပါသည်အခြားသူများကိုဆကျသှယျဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဘယ်အရာကိုမဖွစျစခွေငျးငှါအဘယျသို့မဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဆက်သွယ်နေကြသည်ထင်သောအရာကိုဖြစ်ပါသည်။
ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်, ပြီးတော့, သဲသဲကွဲကွဲမရှိသော, မရေရာမှုများ, ငါတို့ဆက်သွယ်ရေးအတွက်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်း၏တည်ရှိမှုအဘို့ခွင့်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်စွာထင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်သူတစ်ဦးတတ်နိုင်သမျှသူတို့အားအချက်များပပျောက်ဖို့ကွိုးစားရမယ် - ဥပမာအားဖြင့်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးအငြင်းအခုန်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအယူအဆနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်တူညီသောစကားများသုံးပြီးလူတို့နှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထက်အစောပိုင်းအပေါ်သတ်မှတ်ထားသောသော့ချက်အသုံးအနှုန်းများရဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြင့် ။
လူအများစုဟာမပိုသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာ၌ခွငျးအားဖွငျ့အရကောင်းစွာအလုံအလောက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်နိုင်ပါတယ်။ ကြောင်းဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့လုံလောက်သည်ဆိုပါက, အဘယ်ကြောင့်တိုးတက်စေရန်အပိုအချိန်နှင့်အလုပ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံ? သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းအဘို့အမြင့်မားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းများရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိသူတွေကိုသို့သော်ရုံအသက်တာ၌အားဖြင့်ရရန်ရှင်းလင်းသောနိမ့်ဆုံးကိုပြုသဖြင့်လုပ်မရဘူး - ပိုပြီးပညာရေးနှင့်အလေ့အကျင့်လိုအပ်နေပါသည်။
မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ် အငြင်းပွားမှုများသို့တွားအပေါင်းတို့နှင့်အချိန်ကိုအငွငျးပှားရာဆင်ခြင်ခြင်းအတွက်အမှားအယွင်းများပါ၏ ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏အလေ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူတို့ကိုနှင့်အခြားသူများ '' အငြင်းပွားမှုများမှာသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်ဖော်ထုတ်အတွက်အကူအညီကျူးလွန်ရှောင်ရှားကူညီသင့်ပါတယ်။ ဟာမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ကတိပြုထားတဲ့အငြင်းအခုံက၎င်း၏နိဂုံးချုပ်လကျခံဖို့အကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်မပေးနိုငျသညျ ထို့ကွောငျ့, နေသမျှကာလပတ်လုံးမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ကျူးလွန်လျက်ရှိသည်အတိုင်း, အငြင်းပွားမှုများအလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖြစ်ခြင်းကြသည်မဟုတ်။
လူတွေလျင်မြန်စွာအကြပ်အတည်းမဆိုမျိုးအတွက်ပထမဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံးနိဂုံးချုပ်သွားဘို့ကလွယ်ကူခြင်းနှင့်ဘုံရဲ့, ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စကို၏အချက်ကိုသိသာနိဂုံးချုပ်အမြဲမှန်ကန်သောတဦးတည်းမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, တစ်ချိန်ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူတို့ကိုအခြားအရာတစ်ခုခု၏မျက်နှာသာအတွက်ကြောင့်စွန့်လွှတ်ရရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်တဲ့ကောက်ချက်ချမှတ် - အားလုံးအပြီး, အဘယ်သူမျှမမှားဖို့လိုသည်, ဘူးသူတို့
တစ်ချိန်ကအထဲတွင်ဒုက္ခထဲကထွက်ရရန်ကြိုးစားရန်ထက်ကဒုက္ခကိုရှောင်ရှားဖို့ သာ. ကောင်း၏သောကြောင့်, ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်အဖြစ်ကောင်းစွာသတိထားစဉ်းစားတွေးခေါ်အလေးပေး - နှငျ့သငျကရှောင်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကောက်ချက်မှခုန်မဟုတ်ဆိုလိုသည်။ ရှေ့ဆက်သွားနှင့်တစ်ခုသိသာနိဂုံးချုပ်၏တည်ရှိမှုအသိအမှတျပွုကအားလုံးကိုအပြီးညာဘက်ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဒါပေမဲ့တခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်စဉ်းစားခဲ့ကြတိုင်အောင်ချမှတ်ကြပါဘူး။
ဒီလူအားလုံးအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ပြင်းထန်စွာနှင့်သံသယစဉ်းစားရန်ပြိုးထောငျရပါသောအချို့သော key ကို attribute တွေ့အမြန်အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ချက်ချင်းသိသာမထင်နိုင်ပေမဲ့, သငျသညျပိုကောင်းတဲ့အရေးပါတဲ့တွေးခေါ်ဖြစ်လာဖို့ဒဿနသို့မဟုတ်သိပ္ပံတစ်ဒီဂရီမလိုအပ်ပါဘူး။ အခြေခံပြဿနာများကိုအကြောင်းကိုတချို့ကပညာရေးလိုအပ်ပေမယ့်ပျမ်းမျှလူတစ်ဦးကိုကိုင်တွယ်လို့မရဘူးကြောင့်ဘာမျှဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံယုတ္တိဗေဒ၏အချို့ရှုထောငျ့ခက်ခဲအဖြစ်ကိုဖြတ်ပြီးလာစေခြင်းငှါ, အဆုံး၌ကား, ကအဆင်ပြေဖြစ်လာမှသာတလမ်းတည်းဖြင့်လည်းမရှိ: အလေ့အကျင့်။ သငျသညျ, ဥပမာ, ကိုယ့်အမည်များစာရင်းတစ်ခုကျက်မှတ်ခြင်းဖြင့်မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်အသိအမှတ်ပြုမှာကောင်းသောဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အဲဒီအစား, သငျသညျဂရုတစိုက်အငြင်းပွားမှုများကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ကြောင်းလမ်းမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့သင်ယူဖို့အချိန်ကိုယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်သည်ထိုအပေါ်ဖြုန်းပိုအချိန်, ပိုသည့်သဘာဝကြောင့်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် - ဒါဆိုသင်တန်းကိစ္စအဖြစ်မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်များ၏အမည်များကိုမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။
တူညီတဲ့အခြေခံယုတ္တိဗေဒအခြားအယူအဆမှန်သည်။ သင်သည်ထိုသူတို့စဉ်းစားနဲ့သူတို့ကိုအသုံးချလျှင်, သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူသက်သာခံစားရနှင့်အမှန်တကယ်ကြိုးစားစရာမလိုဘဲသင်ဖတ်ဘာမှအတွက်သေချာသောဆငျခွေပါသောနည်းဗျူဟာများနှင့်နည်းစနစ်ကိုအသိအမှတ်မပြုပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါတိကျတဲ့ဝေါဟာရ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တလျှောက်ကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအလေ့အကျင့်ကိုစိတ်ဝင်စားပါက, အကူအညီနဲ့ရှာတွေ့မှတဦးတည်းနေရာကောင်းကဒီ site ရဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ထိုအငြင်းပွားမှုများအများကြီးဖတ်ပါနှင့်အလေ့အကျင့်ထဲသို့သွင်းထားသည်ဤ site ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားတဲ့နည်းစနစ်အများအပြားကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။ သငျသညျကိုလညျးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးနိုငျ တရားဝင်မှု အထူးသဖြင့်ငြင်းခုံ၏သို့မဟုတ်ကျန်းမာခြင်း - တစ်ဦးအငြင်းအခုံမှားယွင်းနေတတ်သို့မဟုတ်အမှုအရာညာဘက်ရရှိသွားတဲ့ဘယ်မှာသင်ပိုကောင်းနားလည်ရန်ကူညီနိုင်သူကလူအများကြီးရှိပါတယ်။
လေးစားဘာလဲ? ဒါဟာဘာသာတရားသို့မဟုတ် Theism လေးစားပါတယျဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါသလော
ဘယ်လို genetic mutation Drive ကိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
Intelligent ဒီဇိုင်းကျော် Kitzmiller v ။ ဒိုဗာ, အဥပဒေရေးရာတိုက်ပွဲ
လောက Humanitarian သည် vs. ဘာသာရေး: အ Difference ကဘာလဲ?
အိမ်ထောင်ရေးနှင့်ဘာသာတရား: RITES သို့မဟုတ်ပြည်တွင်းစစ်ညာ?
Accommodationists နှင့်ဘုရားကျောင်းနှင့်ပြည်နယ်များ၏ Separation
Logical Positivism ကဘာလဲ? Logical Positivism ၏သမိုင်း, Logical Positivists
အဆိုပါ Danbury နှစ်ခြင်းမှဂျက်ဖာဆန်ရဲ့ပေးစာ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်: မာယာဘာသာတရားအတွက် Chac, မိုး၏ဘုရားသခင်နှင့် Lightning
Agnosticism ကဘာလဲ? အဖြေများနှင့်အရင်းအမြစ်များ၏အညွှန်းကိန်း
မစ္စတာ & Mrs Iyer: အကြမ်းဖက်မှုကြားထဲကချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်
အဆိုပါ SAT နှင့် ACT စာမေးပွဲများကိုအကြားကွာခြားချက်များ
ဆား Folklore နှင့်မှော်
သင်္ဘောပနားမားတူးမြောင်းမှတဆင့်ဘယ် Direction အဖွဲ့ရွှေ့သလား?
စတင် - Beginners များအတွက် Bodybuilding
Cómo verificar demora en puentes internacionales entre မက္ကစီကိုက y အီးယူ
အဆိုပါ Dunning-Kruger Effect တစ်ခုနိဒါန်း
ဂရိတ်ကျောင်းသားများ၏ 10 လက်ခဏာ
အဆိုပါ Post ကို-စစ်ပွဲစီးပွားရေး: 1945-1960
တစ်ဦး Poisson ဖြန့်ဖြူး၏ကှဲလှဲ calculate ကိုရန်ကဘယ်လို
Quotes က 'မစ္စစ္စပီအပေါ်ဘဝက' '
အဘယ်ကြောင့်ဟန်တစ်ကိုယ်တော်ပြောသူက 12 Parsecs အတွက် Kessel Run ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သလား
နှစ်ချက်ဆိုးကျိုး? သူတို့ကစပိန်အတွက် OK ကိုနေ
Anti-အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲအကြောင်း 21 Quotes
Right Livelihood: တစ်နေထိုင်မှုဝင်ငွေအကောင်းဆုံး၏ကျင့်ဝတ်
လာမယ့်တန်း Term - Mint,